Kenya oo dalbatay in mar saddexaad dib loo dhigo dacwadda badda iyo Soomaaliya oo diiddan - Calanka.com
Kenya oo dalbatay in mar saddexaad dib loo dhigo dacwadda badda iyo Soomaaliya oo diiddan
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hor timid dib u dhigidda dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya ka dib markii mar kale Kenya ay dalbatay in dib loo dhigo, sababo ku aadan Cudurka Corona Virus.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Kenya inay dooneyso in muranka lagu xalliyo meel ka baxsan maxkamadda.
Kiiskan badda oo laba jeer oo hore maxkamaddu dib u dhigtay sababo la xiriira codsiyo uga yimid dhanka Kenya ayaa lagu ballamay in la qaado bisha Juun ee foodda inagu soo haysa.
“Waa run in dunida cudurkaasi uu ka dilaacay oo maqal furan oo maxkamadda gudaheeda ahi aanay dhici karaynin, isu socodkii aanu jirin oo duulimaadyadii lagu tegi lahaa Hague aanay jirin oonay shaqaynayn oo dal walba albaabadu u xidhanyihiin. Hase yeeshee maxkamaddu waxay soo saartay in shaqadeedii ay wadi doonto habka maqalka iyo muuqaalka ahna ay dacwadaha ku dhegaysan doonto” , ayuu yiri ra’isal wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo BBC la hadlay.
“Bishan Juun dalal dhawr ah ayaa dacwadahooda lagu dhegaysanayaa maqal iyo muuqaal, ilaa hada hal kiis ayay ku dhegaysatay, markhaatiyona way ku dhegaysatay maxkamadu maqal iyo muuqaal, markaa anaga waan ka hor nimi waan diidnay mawqifka Dawladda Federaalka Soomaaliya waxa weeye in aan dacwadaas maalin dib loo dhigin, go’aankaas ayaanan u qornay maxkamada caalamiga ah ee aduunka laguna dhegaysto dacwada habka maqalka iyo muuqaalka ah ama video confrene oo ay maxkamadu hada gacanta ku hayso kana shaqaysay tijaabisayna” ayuu yiri Mar kale Guuleed.
Wali wax war ah oo rasmi ahi kama soo bixin Kenya oo ku saabsan waraaqahan ay ku kala aragtida duwan yihiin Soomaaliye ee ay u direen labada dalba maxkamadda cadaaladda adduunka, hase yeeshee waxa la filayaa in ay maxkamaddu go’aanka ay ka gaadho codsigaa Kenya shaacin doono todobaadka dambe.